Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky Deterônômy (Det 4, 32-34.39-40)
Hoy i Môizy tamin’ny vahoaka Israely: “Anontanio ny andro fahagola tany alohanao, hatramin’ny andro naharian’Andriamanitra ny olombelona teto ambonin’ny tany sy hatramin’ny faravodilanitra na aiza na aiza, raha mba misy zava-dehibe tahaka izany na oviana na oviana, na nisy re toy izany akory na oviana na oviana! Vahoaka aiza no efa nandre ny feon’Andriamanitra niteny tao anatin’ny afo toy ny efa: renao, ka mbola velona ihany izy ? Oviana no mba nisy andriamanitra nanandrana haka firenena anankiray ho azy tao afovoan’ny firenena iray hafa, tamin’ny fitsapana, famantarana, fahagagana, ady, tanana mahery, sandry ahinjitra, ary fangorohoroana lehibe, toraky ny nataon’ny Tompo Andriamanitra ho anareo, teo imasonareo, tany Ejipta ? Koa fantaronao anio sy araiketo ao am-ponao fa ny Tompo no Andriamanitra any amin’ny lanitra ambony sy ety an-tany ambany ary tsy misy hafa. Tandremo ny lalàny sy ny didiny, izay andidiako anao anio, mba ho sambatra ianao, dia ianao sy ny zanakao manaraka anao, ary mba ho lava ny andronao, amin’ny taona mifandimby rehetra any amin’ny tany omen’ny Tompo Andriamanitrao anao”.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (Rôm 8, 14-17)
Raiso ny Fanahim-pananganan-janaka, ka iantsoantsika hoe: Aba, Ray.
Ry kristianina havana, izay rehetra tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra dia zanak’Andriamanitra. Ary izany tokoa,satria tsy Fanahim-panandevozana no noraisinareo, fa Fanahim-pananganan-janaka, ka iantsoantsika hoe: Abà! Ray! Ary ny tenan’io Fanahy io ihany no vavolombelona miaraka amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy, raha miara-mijaly aminy anefa isika, mba hiara-komem-boninahitra aminy koa.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (Mat 28, 16-20)
Tamin’izany andro izany, niaraka nankany Galilea ny mpianatra iraika ambin’ny folo lahy, any amin’ilay tendrombohitra nasain’i Jesoa halehany. Nony nahita Azy izy ireo, izay nisalasala taloha, dia nitsaoka Azy. Ary i Jesoa nanatona azy ireo ka nilaza taminy hoe: “Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina; ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro Aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao”.